Dharka Ilaalinta ugu Fiican Qaliinka Qalliinka Mashiinka xirxirida Laabista iyo Warshadda | UBL
Suudhka Ilaalinta Mashiinka baakadka laabista Qalliinka qalliinka
Dharka la adeegsan karo: dharka ilaalinta, dharka aan boodhka lahayn, dharka qalliinka (dhererku waa inuu ku jiraa xadka mashiinka) iyo dhar la mid ah.
Bacda balaastikada ah ee la adeegsan karo: PP, PE, OPP boorso bac ah oo is-dhejis ah.
Shirkaddayadu waxay ku takhasustay soo saarista mashiinnada isku laabma dharka, waxayna ka iibin jirtay boqolaal macmiil dibadda ah Si kastaba ha ahaatee, cudurka dillaacay awgiis, dawladda Shiinuhu waxay bilowday inay naga dalbato inaan soo saarno mashiinno maaskaro bishii Febraayo 2019. Sidaa darteed, sannadkii la soo dhaafay, ganacsigeena ugu weyn waxaa loo beddelay mashiinno maaskaro, laakiin mashiinnada isku laabma dharka, shirkadeena waa mid aad u xirfad badan.
①. Qalabkan taxanaha ah wuxuu ka kooban yahay tusaalaha aasaasiga ah ee FC-N332A, kaas oo loo adeegsan karo in maryaha midig iyo midig loo laalaabo, loo laabto hal ama laba jeer, si otomaatig ah loogu quudiyo bacaha balaastigga ah oo si otomaatig ah loo buuxiyo bacaha.
Machines Mashiinnadayada waxaa loo qaabeeyey qaybo, kuwaas oo si shaqsi ahaan loo baakadeyn karo qaybo, iyadoo la badbaadinaayo kharashyada gaadiidka. Waxaa lagu rari karaa hawo.
Door Albaabka simbiriirixan waxaa lagu furi karaa iyadoo loo socdo bidix iyo midig. Albaabku waa mid fudud oo waxtar leh, qaab -dhismeedkuna waa mid deggan, adkaysi leh oo fudud, oo macaamiil badan ayaa doorta.
System Nidaamkeena xakamaynta waa mid aad u saaxiibtinimo leh, wuxuuna badbaadin karaa xuduudaha farsamo ee cabbirrada kala duwan ee dharka shaashadda taabashada, oo beddeli kara badeecadaha kaliya waxay u baahan yihiin inay ka doortaan shaashadda taabashada. In ka badan 99 datas.
Intaa waxaa dheer, waxaan ku dhejin karnaa istaroogga ficil kasta oo farsamo shaashadda taabashada. Hagaajinta ayaa aad ugu habboon.
Dharka kalkaalisada, goonnada qalliinka, siigada - dharka aan caddayn, dharka ilaalinta, dharka korontada ku shaqeeya, iwm.
Goonnada qalliinka oo laabma, xirxirida, mashiinka wax lagu xiro oo kulul
Nooca FC-N332A, Midabka mashiinka waa la beddeli karaa
Nooca dharka Goonnooyinka go'doominta, goonnada qalliinka ee la tuuri karo, goonnada qalliinka, dharka ilaalinta
Xawaaraha Qiyaastii 300 ~ 400 xabbadood / saacaddii
Bacda lagu dabaqi karo Boorsada boostada
Ballaca dharka Kahor isku laabidda: qiyaastii 700-750mm
Ka dib isku laabid: 200 ~ 300mm
Dhererka dharka Ka hor intaadan isku laaban 1200 ~ 1300mm
Ka dib isku laabid: 300 ~ 400mm
Baaxadda xajmiga bacda L*W: 280*200mm ~ 450*420mm
Cabbirka mashiinka iyo miisaanka 8200mm*W960mm*H1500mm; 500Kg
Gacanta u dhig gacmaha-> isku laabidda si otomaatig ah-> boorsada otomaatiga ah-> kululaynta otomaatiga ah iyo goynta.
1. Waxaad si toos ah u geli kartaa xajmiga dharka isku laaban oo si caqli leh u hagaajin kartaa ballaca iyo dhererka isku laaban.
2. Waxaad dooran kartaa habab isku laaban oo kala duwan si aad u buuxiso shuruudaha kala duwan.
Habka shaqada: Labada taargood ayaa la kala yaacay si loo abuuro farqiga. Dharka ayaa marka hore la laalaabaa, ka dibna hoos ayaa loo riixaa. Ka ilaali dharka in ay siibato ama dib u soo noqoto, oo ku habboon goonnada qalliinka ee qalabka kala duwan.
Isticmaal walxaha ciidda dhalada ee aluminium si aad uga hortagto sawir -gacmeedka oo aad iska ilaaliso xoqidda goonnada qalliinka.
Qaabka shaqada: Barnaamijku wuxuu dejin karaa masaafada isku laabma hore iyo gadaal, iyo tirada jeer ee isku laabidda.
Goonnada qalliinka waa ka dheer tahay, oo laba jeer hore iyo gadaal ayaa loo laabayaa
Isku laabkii hore ka dib, si otomaatig ah ayuu u dhaqaaqayaa, ka dibna laabka labaad.
Qalabkii ugu horreeyay ee qiiqa iyo kala -soocidda ka hor inta aanad bacda gelin ayaa si hordhac ah u sii dayn kara gaaska oo ka dhigi kara xidhmooyinka dharka si habsami leh.
Qaab -dhismeedka aluminium -ka waxaa loo isticmaalaa in lagu taageero dhululubka, kaas oo ah mid adag oo waara.
Hore: Laabista Tuwaalka otomaatiga ah iyo mashiinka xirxirida
Xiga: Dhar qaro weyn oo dhuuban oo laalaaban mashiinka wax lagu duubo
Mashiinka Laabista Dharka
Mashiinka Xirmada Dharka
Laabista Machine Maro
Shaqada Qalabka ①. Qalabkan taxanaha ah wuxuu ka kooban yahay tusaalaha aasaasiga ah ee FT-M112A, kaas oo loo adeegsan karo in mar loo maro marna bidix iyo midig, loo laabto mid ama laba jeer oo dheer, si otomaatig ah loogu quudiyo bacaha balaastigga ah loona buuxiyo boorsooyinka si otomaatig ah. ②. Qaybaha wax -qabadka waxaa lagu dari karaa sida soo socota: qeybaha shaabadaynta kulul ee otomaatiga ah, qaybaha shaabadaynta jeexitaanka si otomaatig ah, qaybaha is -dhigga otomaatigyada ah ...
Mashiinka Xirmada Dharka, Labeller Dhalo, Calaamadiyaha Dhalada Beerka, Calaamadiyaha Dhalada Khamriga, Mashiinka Calaamadinta Dhalada, Calaamadiyaha Dhalada,